DC मा अहिले सफा हावा छ। तर जसरी पुन: खोल्ने योजनाहरू जारी छन्, यसले कसरी प्रदूषणलाई बेवास्ता गर्न सक्दछ? - BreatheLife2030
DC मा अहिले सफा हावा छ। तर जसरी पुन: खोल्ने योजनाहरू जारी छन्, यसले कसरी प्रदूषणलाई बेवास्ता गर्न सक्दछ ?:
वाशिंगटन, डि.सी. मा वायु गुणवत्ता गत बर्षको यस समय भन्दा केहि १० देखि २०% राम्रो छ। जसरी जिल्ला खुल्छ, प्रदूषणलाई निरन्तरता दिन के गर्न सकिन्छ?
यो एउटा लेख Ethan Goffman द्वारा ग्रेटर ग्रेटर वाशिंगटन। यो यहाँ क्रिएटिव कमन्स / अन्तर्गत पोस्ट गरिएको छ।CC BY-NC 4.0 इजाजत पत्र।
एक महामारी फैलिएको शटडाउन सफा हावा प्राप्त गर्ने कठोर तरीका हो, तर यसले मात्र गरेको छ। डि.सी. मा वायु गुणस्तर गत बर्षको यस पटकको तुलनामा १० देखि २०% राम्रो छ, ऊर्जा तथा वातावरण कार्यालय (डीओईई) का निर्देशक टोमी वेल्सका अनुसार। वास्तवमा, क्षेत्र "अझै अनुभव छ २०२० मा अस्वस्थ हवाको गुणस्तरको साथ एक दिन। "
यो अंशमा सडकमा थोरै कारका कारण र बढि व्यक्तिहरू हिंड्ने र अन्य ट्रान्जिटका अन्य मोड लिने को कारणले हुन सक्छ - यदि तिनीहरू वरिपरि भए भने।
जसरी जिल्ला खुल्छ, प्रदूषणलाई निरन्तरता दिन के गर्न सकिन्छ?
हवाको गुणस्तरमा परिवर्तनको विश्व
हामी ग्रह वरिपरि सफा हवाको अवधिमा छौं। ग्रीन हाउस ग्यास उत्सर्जन १ 17% ले घटे २०२० को अप्रिलमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा। उदाहरणका लागि, दिल्ली, भारतले हानिकारक पीएम २. 2020 कण र नाइट्रोजन डाइअक्साइडमा 70०% भन्दा बढीको गिरावट देखिएको छ, जबकि चीनमा सफा हवाले 2.5 53,000,००० देखि 77,000 XNUMX,००० बीचको ज्यान बचाएको छ। नेशनल ज्योग्राफिक अनुसार.
DC मा कारको विकल्प बढाउन पहिले नै महत्वाकांक्षी कार्यक्रम थियो, र कोरोनाभाइरसलाई जवाफ दिने उपायहरूले यसलाई तीव्र बनाएको छ।
हाम्रो साझा गरिएको नयाँ वास्तविकताले "हाम्रो स्थानको थप कल्पना गर्न अवसर सिर्जना गर्दछ, ताकि साना वातावरणीय पदचिन्हहरू भएका मोडहरूलाई पुरस्कृत गर्न सकौं," सियरा क्लब डीसी चेप्टरको स्मार्ट ग्रोथ समितिका अध्यक्ष पेटन चुंगले भने।
जब हामी क्वारेन्टाइनबाट बाहिर निस्कन्छौं, चाँडो वा बिस्तारै, डीसी क्षेत्रले हामीले अनुभव गरेका केही सफा हावा फाइदालाई कायम राख्न सक्छ?
वायु प्रदूषण को प्रभावहरु
वायु प्रदूषणले कोरोनाभाइरसबाट घातक हानी बढाउँदछ, हार्वर्ड अध्ययन अनुसार, र निश्चित रूपमा अन्य श्वास रोगहरू बिगार्छ। र मौसम परिवर्तनको कारण तातो दिनको बृद्धिले शहरहरूमा वायु प्रदूषणलाई बढावा दिन्छ, एक अमेरिकी फेफड़े एसोसिएसन रिपोर्ट व्याख्या गर्दछ, विगत years बर्षमा अधिक "ओजोन र अल्प-समय कण प्रदूषणको उच्च दिनहरू" को लागि नेतृत्व गर्दछ।
वाशि Washington्टन, डीसीले ओजोन प्रदूषणका लागि एफको ग्रेड प्राप्त गरिसकेका थिए, जसलाई "स्मग पनि भनिन्छ" मा अमेरिकी फेफुली संघबाट एक 2019 रिपोर्ट। स्थानीय वायु प्रदूषणले दम, जोखिमपूर्ण अवरोधक पल्मोनरी रोग, फोक्सोको क्यान्सर र हृदय रोगबाट जोखिम बढाउँदछ।
यस बर्ष, जिल्लाले सफा, स्वस्थ हवाको अनुभव गरिरहेको छ, नाइट्रोजन अक्साइडको स्तरमा २०% कटौती भएको छ - जसले दमलाई बढावा दिन्छ - मौसमको हिसाब गरे पछि पनि डीसीओईका वायु गुणवत्ता प्रभागका एसोसिएट निर्देशक केली क्रॉफर्डले भने। उनले थप गरिन् कि हामी "हाम्रो सब भन्दा लामो" अवधिको बीचमा छौं राम्रो गुणस्तरको दिनहरू "कुनै ओजोन सीमा नाघी"।
त्यहाँ केव्याटहरू छन्। भारी-ट्रक ट्राफिक उच्च स्तरमा रहेको छ। र कती सुधारिएको वायु गुणस्तरको ट्राफिकको कारणले गर्दा चिन्तित हुन्छ, हाम्रो अनौंठो चिसो, बतास वसन्त, र अन्य प्रदूषण स्रोतहरूमा कति गाह्रो छ। वास्तवमा, डीसी, मेरील्याण्ड, र वातावरणको वातावरणीय विभागहरु "प्रयोगहरु र अवलोकन र मापन मा सहयोग गर्दै छन्, ताकि हामी एक गहिरो डुबुल्की लिन सक्छन्" जुन क्षेत्र को सफा हावा को लागी कारकहरु को लागी जिम्मेवार छन्, क्रफोर्ड भने।
र, अवश्य पनि, यातायात पहेलीको केवल एक टुक्रा हो। उल्लेखनीय कुरा के छ भने, "हाम्रो green of% ग्रीन हाउस ग्यास भवनहरूको ऊर्जा प्रयोगका कारण हुन्छन्," वेल्सले भने।
अझै, यातायात कम गर्न स्पष्ट रूपमा यस बर्ष हाम्रो सुधारिएको वायु गुणस्तरको एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा हो। डीसी पहिले नै एकल कार ट्रिपहरू घटाउने काम गरिरहेको थियो र शट डाउनले यसलाई गति दिने अवसरहरू प्रदान गर्‍यो।
१ bike औं स्ट्रिट NW मा बाइक लेन जो बाढ़ द्वारा लाईसेन्स अन्तर्गत Creative Commons.
DC ले ट्रान्जिट विकल्पहरू बढाउन केहि आक्रामक कार्यहरू गर्दछ - तर के यो पर्याप्त छ?
जिल्लाले पैदल यात्रा, बाइकि।, र ट्रान्जिट सुधार गर्न धेरै कदमहरू चालेको छ, जुन सबैले कार ट्राफिक कम गर्दछ र सफा हावामा पुर्‍याउँछ।
"कोलम्बियाको जिल्लामा धेरै दुर्गम यातायात योजनाहरू छन्," चुungले औंल्याए जस्तै सार्नुहोस् DC योजना। चुungका लागि यद्यपि, "विस्तारको स्तर" अपर्याप्त रहेको छ र यसले जिल्लालाई कोरोनाभाइरसको अगाडि छोडिदियो।
"२०२० सम्ममा डीसी सडकमा बाइक लेनहरूको धेरै माईल हुनुपर्दथ्यो। हामी धेरै वर्षदेखि १th औं स्ट्रीट नॉर्थवेस्ट जस्ता मुख्य कोरिडोरहरूमा बस लेनहरूको लागि बिन्ती गरिरहेका छौं। ” महामारी एक पटक हिट भएपछि, "सार्वजनिक स्थानहरूमा आमूल परिवर्तन गर्नु अघि समुदायको पहुँच गर्न गाह्रो भयो।"
जबकि ढिलो कार्यान्वयनको साथ लामो दीर्घकालीन योजनाहरू धेरै न्यायालयहरूको लागि सामान्य बान्की रहेको छ, चुंगले ओक्ल्याण्ड, क्यालिफोर्नियालाई एक शहर भनेर औंल्याए जुन द्रुत र प्रभावकारी ढ act्गले कार्य गर्न तयार थियो। प्रारम्भिक अप्रिल रूपमा, ओकल्यान्डले वाहन पहुँच प्रतिबन्धित गर्‍यो यसको लगभग १०% सडकहरूमा। र युरोपले संयुक्त राज्य अमेरिका भन्दा धेरै राम्रो काम गरेको छ; उदाहरणका लागि, पेरिस छ "मुख्य [धमिल] miles० माईल भन्दा बढि मुख्य धमनीलाई साइकल - राजमार्गहरूको नेटवर्कमा रूपान्तरण गर्नुहोस्।"
अझै, जिल्लाले महामारी र जवाफमा दुवै पहिले धेरै उल्लेखनीय कार्यहरू गरेको छ, जसले सार्वजनिक ट्रान्जिट सुधार गर्दछ र हिँड्न र साइकल चलाउन सजिलो बनाउँदछ। जुन १, शहरले गति सीमा घटायो २ m माईल प्रति घण्टा २० माइल प्रति घण्टा, स्थायी हुनको लागि परिवर्तन। र यसले "ढिलो सडकहरू" को नेटवर्क स्थापना गरेको छ जसले १ m माइल प्रति घण्टाको शीर्ष गतिको साथ स्थानीय यातायातमा कारहरूलाई सीमित गर्दछ।
ढिलो ट्राफिकको एक सह लाभ यो हो कि यसले पैदल यात्री र साइकलमा हुने चोट र मृत्युलाई कम गर्न मद्दत गर्दछ, एक दिशातर्फ एक कदम DC's Vision Zero प्रतिज्ञा २०२2024 सम्म ट्राफिकबाट हुने मृत्युलाई हटाउन। गति सीमामा सानो अंतरले ज्यान गुमाउँदै गयो। जब २० माइल प्रति घण्टा यात्रा गरीरहेको सवारीले ठक्कर दिंदा, १० पैदल यात्रीहरूमध्ये नौ जना जीवित छन् तर m० मील प्रति घण्टा १० मध्ये पाँच मात्र बाँच्दछन्।
सात स्थानमा स्थित शहरको विभिन्न कुनामा, ढिलो सडकहरूले हिड्ने, साइकल चलाउने, र सामान्यतया उत्कृष्ट मौसमको आनन्द लिने अवसरहरू प्रदान गर्दछ, जबकि अन्यबाट सिफारिस गरिएको छ फिट रहन्छ। जडित नेटवर्कबाट टाढा हुँदा, हालका "ढिलो सडकहरू" केवल पहिलो चरण हो, भविष्यको विस्तारको घोषणाको साथ। स्मार्ट-ग्रोथका लागि गठबन्धनका नीति निर्देशक चेरिल कोर्टले भने, "हाम्रो शहरका सबै आठ वडामा सम्पूर्ण छिमेकीहरू जोड्ने ढिलो सडकहरूको नेटवर्क निर्माण गर्नु," दीर्घकालीन आदर्श हो।
यसबाहेक, DC फुटपाथ विस्तार गर्दैछ "किराना स्टोर र अन्य आवश्यक खुद्रा विक्रेताहरूको नजिक" साथै भोजनको लागि बाहिरी ठाउँ थप्दै। यी सुविधाहरू, जुन बाहिर घुम्ने, भोजन गर्ने, र सामान्यतया जीवनको विचार गर्नेको लागि बाहिरी जीवनलाई बढी रमणीय बनाउँदछ, केवल अस्थायी हुनको लागि हो। र शहर छ बन्द सडकहरू रक क्रिक पार्क, फोर्ट डुप्न्ट र एनाकोस्टिया पार्कमा कारहरूको लागि, पैदल यात्रा र बाइकिबिलिटीका अन्य टापुहरू सिर्जना गर्न।
म "आँखा" सडक बस लेन बियन्डडीसी द्वारा लाइसेन्स अन्तर्गत Creative Commons.
शहरले महामारीको फाइदा पनि उठाएको छ बस सेवा सुधार गर्न कार्यक्रमहरू छिटो पार्न। मुख्य मार्गहरूमा समर्पित बस लेनहरूको लागि योजनाहरू जसले अधिक मानिसहरूलाई बढी चाँडो सार्न सक्दछ, लामो समयदेखि रोकिराखेको थियो तर अन्तमा गत वर्ष वा दुईमा यसमा सफल हुन आएको छ। जिल्ला पहिले नै छ समर्पित बस लेनहरू सिर्जना गरियो एच र I स्ट्रिटहरू र १th औं सडकमा, र १th औं स्ट्रिट र के स्ट्रीटमा योजनाहरूको गति बढाइरहेको छ।
ट्रान्जिट अधिवक्ताहरूको लागि खुशीको ताजा टुक्रामा DC सरकारले घोषणा गरेको छ कि यसले "लाइफलाइन नेटवर्क बस कोरिडोरहरूको लागि लेनहरू प्रदान गर्दछ र प्राथमिकता संकेतहरू," २ key कुञ्जी मार्गहरू यस क्षेत्रका लागि आवश्यक मानिन्छ। Cort उत्साह उत्साह व्यक्त कि "शहर समर्पित बस लेनहरु र संकेत प्राथमिकता मा छिटो बढिरहेको छ।"
शहरले इरिभि Street स्ट्रीट र अन्य ठाउँमा कुञ्जी सुरक्षित बाइक लेनहरू पनि समाप्त गर्दैछ। कोर्टले यी प्रयासहरूको प्रशंसा गर्‍यो तर आशा छ कि शहरले अझ बढी गर्न सक्छ "यो साइकल यात्रालाई सुरक्षित र पहुँचयोग्य बनाउन ओभरड्राइभ गर्ने समय हो।" वास्तवमा, उनले तर्क गरिन् कि हामीलाई सबै आठ वडामा साइकल लेन चाहिन्छ।
पहुँच को प्रश्न - र न्याय - सबैका लागि
कोर्टले अस्पतालको एक जना कामदारलाई स pointed्केत गर्यो जसले सवारी पदयात्रामा सवारी सवारीसाथ सवारीसाथ सवारीसाथ सवारीसाथ सवार भएर हावर्ड विश्वविद्यालयको अस्पताल पुग्यो। "त्यस्ता कामदारसँग ढिलो सडकमा राम्रो, सुरक्षित जडित बाइक मार्ग हुनुपर्दछ, त्यो समर्पित बाइक लेन र संरक्षित ट्रेल्समा हो," उनले उद्गार गरिन्।
साइकल मार्गहरूको अभाव भनेको कम आय र कालो र खैरो समुदायहरूमा गहिरो रूपमा प्रवेश गरिएको ढाँचाको एक अंश मात्र हो। यातायात दुर्घटनाबाट प्रभाव र खराब हावाको गुणस्तर यी समूहहरूको लागि विशेष गरी कठोर छ।
जिल्लाले राम्रो गर्‍यो एउटा क्षेत्र भनेको कोलोनाभाइरसको प्रतिक्रियामा सिर्जना गरिएका नयाँ हिड्ने र साइकल यात्रा गर्ने मार्गहरू फैलाएर डीसीभरि बिभिन्न समुदायमा पहुँच पुर्‍याउनु हो। यद्यपि असमानता बाँकी छ।
किराना स्टोरहरूको वरिपरि सडक गतिशीलता परिवर्तन हुँदैछ "सामान्यतया अझ राम्रो रिसोर्स गरिएको इलाकामा," चुंगले भने। कोर्टले औंल्याए कि नदीको पूर्वमा धेरै धेरै किराना स्टोरहरू छैनन्, धेरै दीर्घकालीन इक्विटी समस्याहरू मध्ये एक हो।
सियरा क्लब डीसी चेप्टरको सफा ऊर्जा समितिका अध्यक्ष लारा लेभिसनले भने, "भारी डिजेलहरू कम आय र कालो र खैरो गाउँहरूमा अवस्थित रहेका सुविधाहरू हामी हेर्छौं," भारी ट्रक पनि समस्या हो। उनले थप्छिन्, "अधिक तातो दिनहरू, अधिक जग्गा तह ओजोन र स्वास्थ्य प्रभाव बाहिर काम गर्ने मानिसहरूमा बढी हुन्छन्, र खराब स्वास्थ्यमा रहेका मानिसहरू जो प्रायः कम आय भएका र रंगका मानिसहरू हुन्।"
छरितो पूर्वाधारमा राखिएको दीर्घकालीन असमानताहरूलाई थप प्रयासको आवश्यक पर्दछ। चुंगले "सार्वजनिक रूपमा कम स्रोत भएका क्षेत्रहरुमा असुरक्षित अवस्थाहरुलाई सम्बोधन गर्ने तरिकाहरू पत्ता लगाउन बढी सार्वजनिक पहुँचको सिफारिश गर्नुभयो।" नयाँ प्रयासहरू हालको विरोधसँग जोड्न सकिन्छ, जसले केवल पुलिस हिंसा मात्र होइन तर बहुक्षेत्रमा असमानतालाई समेट्छ।
पेडेस्ट्रियनाइज्ड क्लीभल्याण्ड पार्क सेवा लेन बियन्डडीसी द्वारा लाइसेन्स अन्तर्गत Creative Commons.
भविष्य कस्तो छ?
DC को दीर्घकालीन यातायात योजनाहरू र अधिक खुला सडकहरूको लागि कोविड -१ measures उपायहरू बीच समन्वयको साथ, हालका धेरै परिवर्तनहरू स्थायी हुन सक्छन्, शहर वरिपरि हुने तरिकालाई बदल्दै। र अझ ठूलो टेलिworking्किले भीड कम गर्ने सम्भावना छ, विशेष गरी बिहान र साँझ भीड अवधिमा।
अझै पनि, सार्वजनिक यातायातको लागि समस्या समस्याग्रस्त छ किनकि बस र रेल प्रणालीहरूले आर्थिक समस्याहरूको सामना गर्दछ धेरै कम सवारी चालनबाट र भीडभाड बस र रेलहरूमा फर्कने डरको दीर्घकालीन डरबाट।
यद्यपि सार्वजनिक ट्रान्जिट फैलाउने रोगको बारेमा चिन्ता धेरै हदसम्म अधोरेखित छन्। एक अनुसार भर्खरका एट्लान्टिक लेखपेरिस र अस्ट्रियाको नयाँ अध्ययनले देखाए कि शून्य कोविड १ infection संक्रमण समूहहरू ट्रान्जिट प्रणालीहरूमा पत्ता लगाउन सकिन्छ। ह Hongक Kong र जापानी शहरहरुमा सार्वजनिक यातायात मा निर्भर ठाउँहरु, COVID-19 संख्याहरु तुलनात्मक रूपमा सानो छ।
ट्रान्जिटलाई बढावा दिन सक्ने एक उपाय पहिले नै छ DC काउन्सिल अघि; काउन्सिलमेम्बर चार्ल्स एलेन (वार्ड)) द्वारा पेश गरिएको बिल जुन प्रतिव्यक्ति, प्रति महिना सार्वजनिक ट्रान्जिटलाई १०० डलर अनुदान दिन्छ। वेल्सले भने, "यदि त्यो स्थानमा पूर्ण रूपमा एकै ठाउँमा जान्छ कि मानिसहरू काममा फर्कन्छन्, तब हामी देख्नेछौं कि त्यो ठूलो परिवर्तन हुनेछ कि," वेल्सले भने।
ट्रान्जिटले भर्खरको चलिरहेको बन्दोबस्तबाट एको साथ एक प्रोत्साहन प्राप्त गरेको छ १ 150०% राइडरशिप बृद्धि एकल शनिवारमा। पहिले नै यस क्षेत्रको आंशिक उद्घाटनले मेट्रोबस सेवाको विस्तारलाई धक्का दियो। अझै ट्रान्जिट अनिश्चितताले भरिएको छ।
चुंगसँग केही सुझावहरू थिए। परम्परागत भीड घण्टा कम हुँदा, "ट्रान्जिट प्रणाली एक लामो समय अवधिमा बाहिर राइडरशिप को तल्लो स्तरमा अन्तराल अनुकूल बनाउनु पर्छ।" उनी सल्लाह दिन्छन् कि भाइरस संकुचनको जोखिम कम गर्नका लागि बढ्दो वेंटिलेसन जस्ता अध्ययन विधिहरू।
समग्रमा, त्यसोभए, उत्तम पैदल यात्री र बाइक मार्गहरू, ढिलो ट्राफिक, र अधिक दूरसंचार यी सबै यी कठिन समयहरूमा तीव्र भएका छन्, र त्यसले प्रदूषण कम गर्न र वायुको गुणस्तर सुधार गर्न मद्दत गरेको छ।
ब्यानर फोटो टेड Eytan द्वारा लाइसेन्स अन्तर्गत Creative Commons.